सोह्रौं अनशन बस्न लागेका केसीको अनशन एकाएक स्थगित
कर्पोरेट नेपाल , १८ पुष २०७५, बुधबार, ०६:४० pm
इलाम । सोह्रौं चरणको अनशन बस्न इलाम आइपुगेका डा.गोविन्द केसीले अन्तिम समयमा आएर अनशन स्थगित गरेका छन् । लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि संघर्ष गर्दै आएका उनले सात दिनलाई अनशन स्थगित गरेका हुन ।
उनले बुधबार साँझ सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरी संसद्को संसदीय समितिको आग्रह स्वीकार गर्दै केही दिन लागि अनसन पर सारेको बताए । केसीले भने, ‘म अनशन बस्नै आएको हुँ । तर, संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले कम्तीमा २ दिन अनशन नबस्न आग्रह गरेपछि केही दिन पर्खिने निर्णयमा पुगेको हुँ।’
सो समितिमा आज चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छलफल भएको थियो । छलफल केही दिन लम्बिने देखिएपछि घर्तीले केसीलाई फोन गरेर पर्खिन आग्रह गरेकी हुन् । साथै, घर्तीले साउन १० को सहमतिअनुसारै ऐन ल्याउन पहल भइरहेको पनि केसीलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।
मंगलबार इलाम आएका केसीले सदरमुकाममा अनशन बस्न ठाउँ खोजिरहेको बेला केसीले एकाएक अनशन एक हप्तालाई पर सारेका हुन् । यसअघि उनले जुम्लामा २७ दिन आमरण अनशन बसेका थिए । केसीले अब पनि माग पूरा नभए कुनै पनि हातमा अनशन बस्ने बताउँदै विद्येयक पास पर्न आलटाल गर्ने काम भइरहेको बताए ।
केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरी आगामी १० वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धन पर्खिरहेका काठमाडौंका मेडिकल कजेल सरकारले किनिदिएर काठमाडौंबाहिर जान सहजीकरण गर्नेलगायतका माग छन् ।
देउवापछि पूर्वराष्ट्रपतिले गरे डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह
स्वास्थ्य संकटमा परेपछि केसीलाई रातारात नाइटभिजन हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो
सत्तारुढ नेता भन्छन्– केसीले अनशन तोडे वार्ता गरिन्छ, नत्र गरिन्न
‘डा. केसी नभएको भए काँग्रेस कम्युनिष्टले स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त पार्थे’
संसदीय समितिबाट शिक्षा विधेयक पारित भएपछि आजैदेखि १६ औं अनसन सुरु गर्दै डा. केसी
मन्त्री र पूर्वमन्त्रीले डा. केसीलाई ‘अपराधी’ भन्दै तथानाम गाली गरे